Esory ny loto manimba amin'ny entona famahanana sy ny akora mety hiorina mandritra ny dingana cryogenic. Toy ny hydrocarbon sulfide, gazy karbonika, rano, hydrocarbon mavesatra ary merkiora. Ny entona famahanana karakarain'ny karazana zavamaniry LNG dia samy hafa, noho izany dia tsy mitovy ihany koa ny fomba fitsaboana sy ny fizotrany ...
Tamin'ny 29 Novambra 2021, ny Departemantan'ny Siansa sy ny Teknolojia ao amin'ny Faritanin'i Sichuan dia nikarakara ireo manam-pahaizana mba hitarika fivoriana sy fanombanana sy fisafoana eo an-toerana amin'ny tetik'asa "fikarohana sy fampiharana ny teknolojia fototra amin'ny fiara mpandeha amin'ny solika hydrogène" Sichuan Pro...
Ny CNOOC LPG unit recovery dia mahatonga ny tanimbary an-dranomasina ho hery vaovao amin'ny fitsitsiana angovo
nataon'ny admin tamin'ny 21-11-26
Amin'izao fotoana izao, ny famerenana ny solika fôsily tsy azo havaozina dia mbola asa tena sarotra, ary ny fitaovana sy ny teknolojia ho an'ny fanarenana, fanodinana ary ny fampiasana indray ny entona solika liquefied amin'ny sampana famokarana sy fitehirizana mitsingevana (FPSO) miaraka amin'ny habaka kely sy mifantoka be. module...
Taorian'ny varotra fikojakojana sy ny fanompoana ara-teknika
Taorian'ny fikojakojana ny varotra fe-potoana Warranty Hatramin'ny datin'ny fandefasana, 12Months na 2200 ora mitohy miasa ny vondrona (na inona na inona tonga aloha) dia ny fotoana fiantohana. Ny serivisy fiantohana maharitra dia azo fidina, ary ny orinasa Sichuan Rongteng dia hanendry mpiasa ara-teknika matihanina ...
Masontsivana ara-teknika amin'ny famokarana entona 150KW
Araka ny fepetra takian'ny fitaovana avy amin'ny mpanjifa, ny orinasanay dia afaka manome fitaovana famokarana entona 150KW. Mampiasa motera Steyr T12 ilay vondrona ho loharanom-pahefana hitondrana ny alternator synchronous - marika frantsay malaza Leroy Somer - ho an'ny famokarana herinaratra, ary avy eo mifehy sy mamantatra ny ...
Famokarana hydrogène miaraka amin'ny entona voajanahary sy ny fizotrany
Ny famokarana hydrogène miaraka amin'ny entona voajanahary dia manana tombony amin'ny vidiny ambany sy ny fiantraikany amin'ny ambaratonga. Ny fikarohana sy ny fampivoarana ny teknolojia vaovao mandroso kokoa ho an'ny famokarana hydrogène avy amin'ny entona voajanahary dia antoka manan-danja hamahana ny olan'ny loharano hidrôzenina mora. Toy ny kalitao avo lenta sy madio ...
Ny lanonana fanaterana ny Sinopec dia nizara ozinina famokarana hydrogène metana manankarena
Vita soa aman-tsara ny famokarana sy ny fanaterana ny 300Nm3 / h lanonana fanaterana ny Sinopec nizara methane manankarena hydrogène orinasa famokarana. Eto aho dia te-hanome teny fampidirana fohy ny dingan'ny famokarana hydrogène avy amin'ny entona voajanahary. Miaraka amin'ny fanamafisana ny angovo con...
Fomba famokarana hidrôzenina entona voajanahary nentim-paharazana
Fizotry ny famokarana hidrôzenina entona voajanahary nentim-paharazana Ny fikorianan'ny famokarana hidrôzenina avy amin'ny entona voajanahary dia misy singa efatra: ny fitsaboana entona famahanana, ny fiovan'ny etona, ny fiovan'ny CO ary ny fanadiovana hidrôzenina. (1) Ny vondrona fitsaboana entona fahana dia ampiasaina indrindra amin'ny desulfurization ny entona voajanahary, ny ...
Fahombiazana lehibe ho an'ny tetikasa LNG
Zava-bita lehibe ho an'ny tetikasa LNG S/N Anaran'ny tetikasa Toerana mpanjifa Daty famokarana Fenitra 1 30×104Nm3/d Ozinina LNG Cangxi Natural Gas Investment Co., Ltd Shina 2014 GB 2 10×104Nm3/d Ozinina LNG Hami Xinjie Gas Co., Ltd China 20215 GB 3 50X...
Tetika ara-teknika ny genset voajanahary 150KW
1. Famintinana ny tetikasa 1.1. Fitakiana fitaovana (mbola tsy omena) 1.2. Famaritana fitaovana elektrika (mbola tsy nomena) 1.3. Fepetran'ny tetikasa 1.3.1. Toetran'ny toetr'andro (mbola tsy nomena) Toerana misy ny tetikasa: Haavo: m Temperature antonony isan-taona ℃, Temperature faratampony ℃, Temp...
Inona avy ireo fepetra ilaina amin'ny famolavolana ny orinasa liquefaction entona voajanahary?
(1) Inona no atao hoe LNG? Rehefa mangatsiaka ny entona voajanahary eo amin'ny -162 ℃ eo ambanin'ny fanerena ara-dalàna, dia miova avy amin'ny toetran'ny gazy mankany amin'ny ranon-javatra izy io, izay antsoina hoe entona voajanahary liquefied (LNG raha fohy). (2) Ny singa fototra amin'ny LPG dia (propane sy butane). (3) Ny entona asidra amin'ny entona voajanahary dia manondro (karbonina...
Fizarana hafanana anatiny amin'ny mpanakalo hafanana amin'ny liquefaction
Fizarana mari-pana anatiny ao amin'ny rafitra liquefaction: 1） tsingerin'ny fanitarana nitroka: ny fahasamihafana amin'ny hafanana amin'ny tendrony roa sy ny afovoany amin'ny mpanakalo hafanana dia kely, ary ny fahasamihafana amin'ny hafanana amin'ny faritra hafa dia lehibe. ...